ကွာ porn ကနေတည်းခိုဘို့ကွန်ကရစ်အကြံပေးချက်များ - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
ကွာ porn ကနေတည်းခိုဘို့ကွန်ကရစ်အကြံပေးချက်များ
အကယ်၍ သင်သည်ဤအရာကိုဖတ်နေလျှင်၊ သင်သည် porn ကိုကြည့်ချင်သောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ကောင်းတယ် ဒီနေရာမှာလူတွေကိုညစ်ညမ်းမှုနဲ့ဝေးကွာသွားအောင်ကူညီပေးတဲ့တိကျသောအကြံဥာဏ်များကိုဒီမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ ဤအရာသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်တစ်ဆင့်ချင်းလမ်းညွှန်မဟုတ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ထိုဖော်ပြချက်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေနိုင်သောပရိုဂရမ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောအချို့လင့်များအတွက်ဤစာမူ၏အောက်ခြေရှိအခြားလင့်ခ်များအပိုင်းကိုကြည့်ပါ။ ၎င်းသည်ညစ်ညမ်းသောအကျင့်စွဲသူများအားပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရန်အသုံးဝင်သောတွေ့ရှိချက်များကျပန်းစုဆောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးအကူအညီ -“ Urge Surfing” မှပြင်းထန်သောတွန်းအားများကိုစီမံပါ။
သင့်ရဲ့ stash ကိုဖျက်ပစ်ရန်နှင့် porn sites များမှနှုတ်ထွက်
ဖော်ထုတ်ရန်, ပြီးတော့ဝေးနေဖို့, အစပျိုးခြင်း
ဝဘ် filter များ Install
(အသစ်!) အဆိုပါ PC ကိုတက် Lock, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးဘုံနေရာရွှေ့
အွန်လိုင်းမှ porn စွဲပြန်လည်နာလန်ထူအသိုင်းအဝိုင်း join
တစ်ခုအော့ဖ်လိုင်း porn စွဲပြန်လည်နာလန်ထူအသိုင်းအဝိုင်း join
သငျသညျချော်ပါလျှင်, ASAP ရပ်တန့်
ဘုံထောငျခြောရှောင်ကြဉ်ပါ <-9ထောင်ချောက်များယခုအချိန်အထိစာရင်း!
ဤသည်အသက်ရှင်သောစာရွက်စာတမ်းပါ! ငါနှင့်အခြားသူများရေးသားသည့်အခါငါအသစ်သောပို့စ်များကိုမှလင့်များဖြည့်စွက်ပါလိမ့်မယ်။ အကြံဥာဏ်များသို့မဟုတ်ဝေဖန်မှုများရှိပါသလား။ ကျေးဇူးပြုပြီးအောက်ကမှတ်ချက်ပေးပါ သင်၏ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုပြန်လည်ထူထောင်ရေးခရီး၌သင့်ကိုကူညီပေးသောတိကျသောအစွန်အဖျားရှိပါသလား။ ၎င်းကိုစာမူအသစ်အဖြစ်ရေးပြီးအောက်ပါမှတ်ချက်တစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်အားအသိပေးပါ။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်စာရင်းထဲသို့ထည့်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်ထိုသို့ပြုလုပ်ပါကပို့စ်တစ်ခုတည်းတွင်အကြံဥာဏ်မျိုးစုံမပါ ၀ င်ပါ။ အစွန်အဖျားတစ်ခုစီအတွက်သီးခြားရေးသားချက်များပြုလုပ်ပါ။ အကြောင်းအရာတစ်ခုချင်းစီတွင်အကြောင်းအရာအနည်းငယ်ရေးသားပါ။ ငါနှင့်ငါနှင့်အတူပြုသကဲ့သို့သင်၏ post ၌ဤ post ကိုချိတ်ဆက်စဉ်းစားပါ။ ကွန်ကရစ်ဆက်ထားပါ၊
အခွားသော Links များ:
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောတိကျသောအကြံဥာဏ်များသည်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်အားညစ်ညမ်းရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်ကူညီနိုင်သည့်တိကျသော၊ သူတို့ဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေထွက်မြောက်ရေးအတွက်ပြည့်စုံတဲ့အစီအစဉ်ကိုမရေးထားပါဘူး။ အကယ်၍ သင်သည်ဤစာမျက်နှာကိုသင်ရောက်ရှိပါကသင်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်ဆန္ဒရှိကြောင်းသင်သိထားပြီးဖြစ်သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော link အချို့ကိုပိုမိုယေဘုယျဖြစ်ကြသည်။ အချို့သည်ဆွဲဆောင်နိုင်စေရန်ရည်ရွယ်သည်၊ အချို့သည်ပြည့်စုံသောညစ်ညမ်းသောအစီအစဉ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ အခြားသူများမှာမူညစ်ညမ်းသောအချိုရည်များသာဖြစ်ပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ထွက်စာပေကိုစိတ်ဝင်စားသူတစ် ဦး အားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်။
ငါသည်ဤစာရင်းသိသိသာသာကြီးထွားစေခြင်းငှါတစ်ဦးခံစားချက်ရှိသည်။ ငါစာရင်းကိုအထက်ကွန်ကရစ်ခြေလှမ်းများ၏စာရင်းကို dwarfing ကြောင်းကိုရှာဖွေလျှင်, ငါသည်ဤကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားတစ်ခုကဤများအတွက်သီးခြားစာမျက်နှာ, သို့မဟုတ်သီးခြားစာမကျြနှာကိုလုပ်လိမ့်မည်။
Urge Surfing - အရေးပေါ်အခြေအနေ၌ ဤစကားကိုနားထောင်။
Pornfree ရေဒီယို - အလွန်ကြီးစွာသော Podcast တခုကို။
UrgeZapper - ပြင်းထန်သောတွန်းအားများမှတဆင့်သင့်ကိုကူညီနိုင်သည့်အလွန်ကောင်းသော ၀ က်ဘ်အက်ပလီကေးရှင်း။
ပြုပြင်လိုသော - ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုမှလွတ်မြောက်ရန်စိတ်ပါဝင်စားသူများအတွက်ပြည့်စုံသောအစီအစဉ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် / u / ToonTheShed ဤအစီအစဉ်မှအကြှနျုပျကိုလှည့်ပါ။ ငါသည်ဤအစီအစဉ်ကိုအသုံးမကြနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရက၎င်း၏ content များအတွက် မှနေ. ၎င်းတို့ကိုထောက်ခံပေးရမည်လို့မရပါဘူး။
တူသော 12-Step လိင်စွဲလမ်းပြန်လည်နာလန်ထူအစီအစဉ်များ လိင်စွဲအမည်မသိ, Sexaholics အမည်မသိနှင့် လိင်နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာစွဲအမည်မသိ အချို့ညစ်ညမ်းစွဲများအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
porn စွဲပြန်လည်နာလန်ထူအကြောင်းကို this post အတော်လေးရှည်လျားသည်, ဒါပေမယ့်လည်းအတော်လေးအမြင်။
သငျသညျ compulsive တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုရှိပါကလာရောက်လည်ပတ်စဉ်းစားပါ / r / nofap subreddit ။
LINK - ကွာ porn ကနေတည်းခိုဘို့ကွန်ကရစ်အကြံပေးချက်များ